Eyona aquariums intle. Fumana i-aquarium yakho efanelekileyo ngexabiso elifanelekileyo | Ngeentlanzi
Ngokuqinisekileyo uthanda i-aquariums kungekuphela kukhathalelo lweentlanzi kodwa kunye nomtsalane kunye nobuhle bee-aquariums. Ukuhonjiswa kwe-Aquarium yinto ebalulekileyo ekufuneka uyithathele ingqalelo ukuphucula imeko yasekhaya. Ke ngoko, i-aquarium kufuneka ihlangabezane neemfuno ezithile ezisebenza ekunyamekeleni iintlanzi kwaye, emva koko, ziphucule umhombiso wendawo obeka kuyo.
Kule nqaku sikulethela ezona ndawo zintle zasemanzini ke unokujonga ukuba yeyiphi na efanelekileyo iimfuno zakho. Ungajonga iimpawu zayo, ixabiso kunye nezinto ezibaluleke kakhulu.
1 Yintoni emele ibe nayo i-aquarium?
2 Amandla kunye namandla
4 Eyona aquariums ilungileyo ekhayeni lakho
4.1 Umbra 460410 660-XNUMX
4.2 I-Interpet AMA51506
5 IMonsterShop 10639
Yintoni emele ibe nayo i-aquarium?
Kuba kwiimarike sifumana inani elingenasiphelo leemodeli ezahlukeneyo ze-aquarium, kufuneka senze uhlobo lwesishwankathelo ukubona ukuba zeziphi ezona ndawo zintle zasemanzini. Ngokucacileyo, umntu ngamnye unokhetho olwahlukileyo kwaye uya kugqiba ukukhetha enye okanye enye. Nangona kunjalo, Apha siza kwenza isikhokelo sokuthenga kunye nothelekiso phakathi kweemodeli ngendlela enenjongo. Siza kusekelwa kwimiba ebalulekileyo enje ngomgangatho, izixhobo, ubungakanani, izibonelelo ezisinika zona kunye nezimvo zabanye abasebenzisi abasele bezithengile iimodeli.
Into yokuqala kukwazi ukuba yeyiphi i-aquarium ekufuneka ilungile. Ngale ndlela sinokuzikhokela ngcono xa sisenza inkcazo yemodeli.
Amandla kunye namandla
Nangona ii-aquariums zibonakala zomelele, zisekhona izinto ezinokulahlwa. Ngokuhamba kwexesha kunye nokusetyenziswa bayonakala kwaye kufuneka kutshintshwe. Ke, ukumelana okanye ubomi obuncedo be-aquarium yinto ebalulekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Sinokuvavanya ukuzinza kwemveliso ngomgangatho wezinto ezenziwe ngazo. Ezi zinto ziqina kwaye zomelele ngakumbi, kokukhona i-aquarium iya kuhlala ixesha elide.
Kule meko, ezona zinto zilungileyo ze-aquariums zezo zenziwe ngeglasi, ii-acrylics, okanye iplastiki eyomeleleyo. Izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni zihlala zilula ukuzicoca. Zama ngaphambi kokuba uyithenge ukucoca i-aquarium. Ukuba zenziwe ngokulula, izinto zikumgangatho olungileyo.
Umthamo yenye into ebalulekileyo. Oku kunqunyanyisiwe ziintlobo zeentlanzi esiza kuzikhathalela kunye nenani labantu. Uhlobo ngalunye lufuna umthamo wamanzi owahlukileyo ukuze lube kwimeko yempilo epheleleyo. Ke ngoko, kufuneka kuqala sazi ukuba yeyiphi na intlanzi eyifunayo kwaye leliphi inani leentlanzi esiza kuzigcina nganye yazo. Gcina ukhumbula ukuba kuba yindawo enkulu enamanzi akufuneki ibize kakhulu. Ixabiso lixhomeke ngakumbi kumgangatho wezinto eziveliswe kuzo kunobungakanani.
Njengoko besitshilo ekuqaleni, i-aquarium ayifanelanga kuphela ukuhlangabezana neemfuno zentlanzi, kodwa ikwayinxalenye yomhombiso wasekhaya. Ngamanye amaxesha umbala weentlanzi, kunye ne-aquarium kunye nombala we-décor yasekhaya, wenza indibaniselwano elungileyo kakhulu. Oku kufuneka kucwangciswe kakuhle kwasekuqaleni ukuze yonke into ilunge.
Iimodeli zemveli ze-aquarium ayizizo zodwa ezaziwayo kwiimarike. Ezo zifana neparallelepiped ecacileyo ziqhelekile. Nangona kunjalo, kukwakho nolunye uyilo oluya kukunika ubuntu kunye nomoya onokuonwabela kuphela.
Uninzi lwamanqanaba omsebenzisi kwiimarike asekwe kumgangatho wexabiso lokuhombisa. Ukuba i-aquarium yenza indibaniselwano elungileyo yokuhombisa into yokuqala kusasa, inokugcinwa kamva kwezinye izinto zokuhombisa. Umzekelo, izityalo ze-aquarium zibalulekile ukuba iintlanzi ziyayifuna. Ukuba oku akunjalo, baya kuba yinxalenye yomhombiso kuphela. Nangona izinto zokuhombisa zingabizi, kunzima kwaye kunzima ukuzidibanisa kwi-aquarium. Ke, uyilo oluncinci lubhetele.
Eyona aquariums ilungileyo ekhayeni lakho
Ngoku siza kukhetha ezona ndawo zintle zekhaya lakho kwaye siza kudwelisa izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zazo. Ngale ndlela unokwenza isikhokelo sokuthenga esisekwe kuthelekiso olulungileyo.
Umbra 460410 660-XNUMX
Le modeli inethuba lokuba noyilo oluncinci. Njengoko ayinkulu kakhulu, kunokuba yinto elungileyo ukuhombisa idesika okanye nayiphi na itafile kwigumbi lokuhlala. Mhlawumbi into engalunganga kukuba ubungakanani bayo buqu bunokuba luncedo kodwa bube ngumda. Ukuba nobukhulu obuncinci, inani leentlanzi elinokuzakha kunye nohlobo lweentlobo zincinci. Ukuba intlanzi ifuna isixa esikhulu samanzi, le aquarium ayinakukwazi ukuyifumana.
Ukuba ujonga i-aquarium entle, elula, ekulula ukuyigcina kwaye awufuni ukuba neentlanzi ezininzi, le modeli inokwanelisa ngokwanelisayo zonke iimfuno zakho. Ungayithenga apha ngexabiso le- € 35.
Kwifashoni ngoku ngo-2019 zii-aquariums ezimile okwe cube. Le modeli inezinto ze-acrylic ezisemgangathweni ekuvumela ukuba ubone konke okungaphakathi kwetanki ngokugqibeleleyo. Ubungakanani bayo buncinci kodwa buyenza ilungele ukuba neqela leentlanzi ezincinci. Kuyacetyiswa ukuba uhombise ngezityalo ezingezizo kunye namatye athile ukunika indawo yokuhombisa kunye nenyani ngakumbi kwindalo yezi zilwanyana.
Faka i-bulb ye-LED ephezulu kunye nomthamo wamanzi weelitha ezili-12. Inokungafaniyo okukhulu kuba ayisebenzi njenge-aquarium kuphela, kodwa ikwasebenza njenge-terrarium, umzekelo. Eyona nto iphosakeleyo kukuba ayizisi izincedisi. Ungayithenga ngokuchofoza apha ngexabiso le- € 66,87.
Njengoko igama layo lisitsho, yi-aquarium enomthamo omkhulu. Ingabamba iilitha ezingama-300 zamanzi kwaye lukhetho olufanelekileyo kwabo basebenzisi banendawo eyaneleyo ekhoyo kwaye bafuna ukuba neentlanzi ezininzi.
Iglasi ine-panorama enesidanga se-180 ukuze ubone yonke ingaphakathi le-aquarium. Ine-LED yamandla aphakamileyo ekhetha ukukhula kwezide kunye nesifudumezi esilawula ubushushu. Ukugqitywa kulungile, okuya kuyenza ilingane kakuhle nokuhonjiswa kwekhaya lakho.
Izinto ezingalunganga zinokushwankathelwa ngokuhluza, kuba unamanzi amaninzi, kuya kufuneka ucofe amanzi amaninzi ngokuqhubekayo. Ukongeza, ubungakanani bayo buyenza ilungiswe, kuba kunzima ukuyijikeleza. Yithenge apha.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso unokukhetha phakathi kwezona ndawo zasemanzini ezikulungeleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Eyona aquariums intle